VK ဂီတမှအခမဲ့အသံအရည်အသွေးဖြင့်အခမဲ့တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နည်းလမ်း ၂ Androidsis
VK ဂီတမှအခမဲ့အသံအရည်အသွေးဖြင့်အခမဲ့တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နည်းလမ်း ၂ နည်း
သင်ပုံမှန်ဖြစ်လျှင် တေးဂီတကိုမိုဘိုင်းဖုန်းသို့တိုက်ရိုက်ကူးယူပါ mp3တရုတ် you ဂီတဆာဗာတခုကို surely တော့နာမည် know အောက်မှာသိမှာပေါ့ VK သီချင်းဥပမာ၊ အာရှဒေသရှိမူရင်း Huawei ဂီတ application ကဲ့သို့အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးသည်။ စကားမစပ်၊ ဒီဟွာဝေဂီတလျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်အတွက် mp3 မှအခမဲ့သီချင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တရုတ်နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်မှတ်ပုံတင်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့အားလည်းခွင့်ပြုထားသည်။ တေးဂီတအခမဲ့, ခဏတာမှစပြီး apk ကိုဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးခဲ့တယ် နှင့်အထက်ပါအာရှနယ်မြေပြင်ပရှိလျှောက်လွှာကိုသုံးပါ။
ကောင်းပြီ, သင်ယခုရှိရိုးရှင်းတဲ့ application ကိုရှာနေလျှင်, ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်သွားပါ VK Music မှအသံအရည်အသွေးအပြည့်ဖြင့်အခမဲ့သီချင်းများကိုတိုက်ရိုက်ရယူပါပြီးရင်မင်းကိုဒီနည်းလမ်းကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့တင်ပြမယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် Android အတွက်အခမဲ့လျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်မည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၎င်းကို Google Play Store မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ မရနိုင်ပါ။ အခြားမည်သည့်အရာမျှဒေါင်းလုပ်လုပ်စရာမလိုဘဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းမှတဆင့် ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ရည်စူးထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သောအခမဲ့အသံအရည်အသွေးဖြင့်အခမဲ့သီချင်းများကို VK Music ဆာဗာများမှတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။
အားလုံး၏ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာနည်းလမ်းဖြစ်သည် ဒီလျှောက်လွှာကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ ၏နာမ၌အောက်မှာ Ultra ဂီတ ကျွန်ုပ်တို့ကို VK Music ဆာဗာများသို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကမ်းလှမ်းသည် သီချင်းတစ်ပုဒ်ချင်းကို download လုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုလုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မသင့်လျော်ပါ။
အခမဲ့ဂီတကိုအများဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဤအလွန်ကောင်းသောလျှောက်လွှာ၏ထူးခြားမှုသည်လျှောက်လွှာနှင့်အတူတူဖြစ်သည် မည်သည့်နည်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကို log in လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်မလိုပါ, ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် VK Music တွင်တိုက်ရိုက်တင်ထားသောအကြောင်းအရာများကို download လုပ်ပါကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားသောသီချင်းများသို့မဟုတ်တေးသီချင်းများ၏အသံအရည်အသွေးကိုရွေးချယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် application ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ရွေးချယ်ထားသောတေးဂီတကို download လုပ်ခြင်းသည်၎င်းအား၎င်း၏ဆာဗာများပေါ်တွင်ထားရှိသည့်အမြင့်ဆုံးအသံအရည်အသွေးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးအသံအရည်အသွေးမှာ 320 Kbps ဖြစ်သည်ချွင်းချက်အချို့ရှိသော်လည်း download အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကို 192 Kbps သာတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊
တစ်ချိန်က Android ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော apk ကို install လုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသော option ကို enable လုပ်ရန်လိုသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Android ၏ setting အတွင်း အပိုင်းထဲမှာ လုံခွုံရေး၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည် အမည်မသိအရင်းအမြစ်များသို့မဟုတ်မသိသောမူလအစ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Play Store ပြင်ပရှိ application များကို apk format ဖြင့်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့အာဏာကိုရန်ရှိသည်အခြားနည်းလမ်း VK Music မှအသံအရည်အသွေးအပြည့်ဖြင့်အခမဲ့ဂီတကိုရယူနိုင်ပြီးမည်သည့်အရာကိုမှတပ်ဆင်စရာမလိုပါ, ငါရံဖန်ရံခါအသုံးပြုသူများအဘို့ဤနည်းအကြံပြုပါသည် ဒီဝဘ်စာမျက်နှာကိုရိုက်ထည့်ခြင်းUltra Music application ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား VK Music မှအသံအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဖြင့်အခမဲ့သီချင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့စိတ် ၀ င်စားသောသီချင်းများ၏ download အရည်အသွေးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဤနောက်ဆုံးပုံစံကိုမည်သည့် operating system နှင့်မဆို device အမျိုးအစားတိုင်းအတွက်တရားဝင်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ သင့်တွင်မည်သည့် browser သို့မဟုတ် Web browser ကို install လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက်မှာကျွန်တော်ဟာ Android မှာ Chrome ကနေအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာပြသပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူက Firefox မှာ Linux၊ Chrome နှင့် Safari မှ MAC မှ၎င်း၊ Windows 10 မှမီးလျှံမြေခွေးမှ Firefox တွင်အလုပ်လုပ်သည်ကိုလည်းအတည်ပြုနိုင်သည်။
အခြားရွေးချယ်စရာများကိုသင်ကြိုးစားလိုပါက၎င်းတို့ကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် အခမဲ့ဂီတ Android ကို download လုပ်ရန် applications များ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » VK ဂီတမှအခမဲ့အသံအရည်အသွေးဖြင့်အခမဲ့တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နည်းလမ်း ၂ နည်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကောင်းသော app တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်။ ဤသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ရှာဖွေနေသည့် repertoire အားလုံးမရှိသော်လည်းအများစုမှာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ!
၎င်းသည်ပေးချေထားသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးဖြစ်ပုံရသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အခြားတစ်ယောက်ကိုဝဗ်ပေါ်၌ထုတ်ဝေသည်နှင့်မကြာမီ
Samsung Pay ကိုအိန္ဒိယတွင်တရားဝင်ရပြီ